ဒညင်းသီး ကြိုက်ရင် ဘယ်လိုစားမလဲ ~ ကျွန်တော့်ဥယျာဉ်လေး
“ ❤ ဤဘလော့ရဲ့ Post များကို အမြဲ Update ပြုလုပ်ပေးလျှက်ရှိပါသည် ❤ တင်ပီးသမျှ Post ခေါင်းစဉ်များကို ကြည့်ရန် Blog Archives ကိုနှိပ်ပါ ❤ ” ရှာရန်
ဒညင်းသီး ကြိုက်ရင် ဘယ်လိုစားမလဲ
လူမျိုးတို့ အကြိုက်ရိုးရာ အစားအစာဖြစ်သော တညင်းသီး စားခြင်းမှာ အနောက်တိုင်း ဆေးပညာရှင် ဆရာဝန်ကြီများ လုံးဝလက် မခံသော အစားအစာ ဖြစ်သည်။ ကျောက်ကပ်နှင့် ဆီးလမ်းကြောင်း ပိတ် ပြီးအသက်အန္တရာယ် ပြုနိုင်သော အစားအစာ ဖြစ်သည်။ များများစား မိ၍ ဆီးလမ်းကြောင်း ပိတ်သွားသဖြင့် ခွဲစိတ်ခန်းဝန်ပြီး သံပိုက်ဖြင့် ဆီးချူရသူ ပင်ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ မြန်မာ လူမျိုးတို့သည် တညင်းသီးကို အဘယ့်ကြောင့်
ကြိုက်သနည်း ဟုမူ နှုတ်မြိန်သော အစားအစာဖြစ်၍ဟု ဆိုနိုင်သည်။ တညင်းသီး၏ ထူးခြားသော အစွမ်းသတ္တိမှာ ခံတွင်းပျက်ပြီး စားချင်သောက်ချင်စိတ် မရှိသူတို့စေးထန်သော၊ ဖန်ပြီးစပ်သော အရသာတို့ဖြင့် လျှာပေါ်ရှိ အရသာ ဖုများကို နိုးကြားစေပြီး စားချင် သောက်ချင်စိတ် ဖြစ်လာသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
တညင်းသီး စားပုံ အမျိုးမျိုးရှိသည်။ ပြုတ်၍ သော်လည်းကောင်း၊ မီးဖုတ်၍ သော်လည်းကောင်း၊ ဆားရည် စိမ်၍ သော်လည်းကောင်း၊ အဖန်ဓာတ်နှင့် အစေးဓာတ် ကုန်အောင် ပြုပြင် စားသုံး ကြသည်။ ရှေးယခင်က မန္တလေး ဈေးချိုတော် အလယ်ပေါက်တွင် ရောင်းသော တညင်းသီး အုန်းနို့ဆမ်းသည် နာမည်ကြီးသော ဈေးချို သရေစာဖြစ်ခဲ့ ဖူးသည်။ ယခုထိလည်း ကျော်ကြားဆဲ၊ ရောင်းကောင်း ဆဲဖြစ်သည်။ Altermative Medicine ဟုခေါ်သော ပေါင်းကူး ဆေးပညာ ပါရဂူ ဒေါက်တာ ခင်မောင်လွင်၏ ဟောပြောချက်တွင် တညင်းသီးကို ဓာတ်ခွဲ သုတေသန ပြုကြည့်သောအခါ လူကို အကျိုးပြုသည့် မည်သည့် အဟာရ မျှမပါဝင်ဟု ဆိုသည်။ ၎င်းတွင် ပါဝင်သော ဖန်ချောင်း ကဲ့သို့သော ကလာပ်စည်းများသည် ကျောက်ကပ်တွင် သွားပိတ်နိုင်သဖြင့်
အန္တရာယ် ရှိသည်။ ကျောက်ကပ်ပျက်စီး စေနိုင်သည်။ စားသင့်သည့် အသီး မဟုတ်။ အတိုင်း အတာမရှိ။ လုံးဝမစားသင့်သော အသီးမျိုး ဖြစ်သည်ဟု တင်ပြထားသည်။ သို့သော် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်နှင့် ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး တို့မှလာသော တညင်းသီးကို မြန်မာတို့ စားသုံးခဲ့သည်မှာ နှစ်ပေါင်း ၂၀ဝ ကျော်ခဲ့ပြီဟု သိရှိရသည်။ တညင်းသီးကို ကြိုက်သူများ အတွက် တင်ပြလိုသည်မှာ မြန်မာ့ ရိုးရာဆေးပညာ ရှု့ထောင့်များအရ စေးထန်ပျစ်ချွဲသော အာပေါအာဗန္ဓရ အစာဖြစ်သည်။ အာကာသကို ပျက်စေသဖြင့် အပေါက်အခေါင်းများ ကိုပိတ်စေနိုင်သော အစာဖြစ်သည်။ ထိုအစာကိုစားလျှင် အာကာသ ပွင့်စေတတ်သော အစာနှင့် တွဲဖက်စားသင့်သည်။ တညင်းသီးပြုတ်ကို တို့စရာများ အဖြစ် စားလျှင် အဖြေဓာတ်အဖြစ် ရှောက်ရွက် အနည်းငယ်ကို တို့စားပေးပါ။ ပိတ်သော အာကာသဓာတ် ကိုပြန်ပွင့်အောင် ကူညီပေးနိုင်သည်။ တညင်းသီး ပြုတ်လျှင် သကြား အနည်းငယ်နှင့် ရှောက်ရွက်ထည့်ပြီး ပြုတ်ပါ။ နူးလွယ်ပြီး အဖန်ဓာတ်၊ အစေးဓာတ်လျော့နည်း စေသည်။ တညင်းသီးကို ရင့်သည့် အသီးရှောင် ပြီးနုသော အသီးများကို ထက်ခြမ်းခွဲပြီး ဖန်ပုလင်းတွင် ထည့်ပြီးဆားရည် စိမ်ထားပါ။ အာကာသ ပိတ်ခြင်း၊
ကျောက်ကပ်တွင် အစေးဓာတ်ပိတ်ဆို့ ခြင်းမှကာကွယ် နိုင်ပါသည်။ ထမင်းစားသောအခါ
ကြိုက်တတ်၍ တညင်းသီးများများ စားမိလျှင်ဖြစ်စေ၊ တညင်းသီး အုန်းနို့ဆမ်းစားမိလျှင် ဖြစ်စေ၊စားပြီးပြီးချင်း သံပုရာဖျော်ရည် တစ်ခွက် သောက်ပေးပါ။ အဆိပ် မတက်စေနိုင်သော အဖြေဓာတ်ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြလိုက် ရပေသည်။ BY SHADE JOURNAL
တင်ပြရန်: No comments:
“ ❤ ဒီ blog လေးကို နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်facebook like လေးလုပ်ပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်နော် ❤ ” Facebook Page
“ ❤ လက်ရှိ ဒီ blog ထဲကရှိနေတဲ့သူတွေနဲ့ chat နိုင်မယ့် ChatWING လေးပါ ❤ ” Please contact us at info@chatwing.com if you cant embed the chatbox
Online Radio (Malaysia)
ပိုစ့်တွေ mail ကဖတ်ရအောင်
ကျွန်တော်ဘလော့ကို တည်ထောင်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က မသိသေးတဲ့သူတွေနဲ့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း လေ့လာဖို့အတွက်ပါ။ ဒီပို့စ်လေးတွေက ကျွန်တော်လေ့လာဖတ်ရှုတဲ့ စာအုပ်တွေ ဆိုဒ်တွေကကူးယူထားတာပါ. ဒီဘလော့လေးက ကျနော့်အတွက် မှတ်စုစာအုပ်လေးပါပဲ..လာလည်တဲ့အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. ♥♥ လူကြိုက်များသော ဘလော့များ ♥♥
တရားတော်များကို download လုပ်နိုင်မည့် website များ
စွန့်စားလိုစိတ်ရှိသော အမျိုးသမီးများ လိင် စိတ်ပြင်းထန်ကြောင်းလေ့လာတွေ့ ရှိ
စာအုပ်များ download ဆွဲရန်
နေ့စဉ်ဘ၀နှင့် နုပျိုခြင်း ခရီးစဉ်
*** မျက်ကွင်းညိုနေပါသလား.. ***
Gtalk photo များ ပုံလှလှလေးတွေပါ
" သွား " များ ဖြူဝင်းစေရန် နည်းလမ်းကောင်း
အကြည်တော် ၏ စာအုပ်များစုစည်းမှု
ကြက်သွန်နီနဲ့ အချစ်စစ် ရှာလိုက်ကြရအောင်
“ ❤ သူငယ်ချင်းတို့ ဆိုဒ်တွေကို ဒီမှာ link ချိတ်စေချင်တယ်ဆိုရင် cbox မှာ ဆိုဒ် link လေးတွေ ထားခဲ့နိုင်ပါတယ် ❤ ” တခုခုတော့ပြောခဲ့ပါနော်
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br><a href="http://myooyinlay.blogspot.com/"><img border="0" src="http://4.bp.blogspot.com/-h1gv8-rzrww/UGaAwJn9zxI/AAAAAAAAAPw/8ChTNZEFAZU/s1600/.jpg" /></a></div><br><div class="widget-content"><br><div class="widget-content"><br></div></div>
မြန်မာတိုင်း(မ်)မြန်မာနိုင်ငံမှ လူကြိုက်အများဆုံး ဆိုဒ်များ7 Day News ဂျာနယ်Eleven ဂျာနယ်ရန်ကုန်မီဒီယာဂျာနယ်ရှိတ်..ဂျာနယ်အလင်းတန်းဂျာနယ်နိုင်ငံတကာသတင်းHOT News ဂျာနယ်ပေါ်ပျူလာဂျာနယ်Myanmar CNN Newsမဟာရွှေအမြုတေ(အနုပညာဂျာနယ်)ဈေးကွက်ဂျာနယ်မလေးရှားအွန်လိုင်းမီဒီယာအင်တာနက်ဂျာနယ်ရွှေမြန်မာမီဒီယာDaily မြန်မာသတင်းစုံဂျာနယ်ဧရာဝတီသတင်းMyanmar Express (မြန်မာသတင်းစုံ)မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာကြေးမုံသတင်းစာမြို့တော်ပုသိမ်သတင်းစဉ်ရတနာပုံနေပြည်တော်သတင်းစာ နည်းပညာ
နတ်ဆိုးနေဇော်လင်းကောင်းမင်းထက်(ဘလော့)itfieldnet.blogspot.comလွင်မင်းဗိုလ်KP-3 နည်းပညာ(ဘလော့)IT Guide Myanmar Myanmar Onlineကိုယ်ပိုင် ၀ဒ်ဆိုက်ဖွင့်မယ်ဘလော့တည်ဆောက်ခြင်း
Naing Wedside များ
ကမ္ဘောဇ Football Clubချလ်ဆီး ပရိတ်သတ်အတွက်အမှတ်ပေးဇယား(league tabel
)Myanmar GoalSoccer Myanmarhttp://www.livescores.com/ စာအုပ်စင်များ
နေ့သစ်ချယ်ရီမြို့တော်စကားဝါမြေ၀ိညာဉ်သစ်ဗမာ့ကြယ် ကွန်ယက်စေတနာပန်းခင်းMyanmar Bookshelfသံလွင်အိပ်မက် အင်တာနက်မဂ္ဂဇင်း သီချင်းဆိုင်ရာ
သီချင်းအိမ်အောင်လေး သီချင်းဆိုဒ်ရွှေအိုးအခမဲ့သီချင်းဝဒ်ဆိုက်ပန်းစကားသီချင်းမျိုးစုံမြန်မာMp4 သီချင်းများ ရှာဖွေရာနေကမ္ဘာ မြန်မာ Mp3 သီချင်းများသစ္စာရပ်ဝန်း Flash Song စုစည်းမှုFlash Song စုစည်းမှု(၂)ချင်းလေး Myanmar flash Songsမြန်မာ(online music)Youtube မြန်မာ သီချင်းများMusic All ChannelMyanmar MP3 DownloadMyanmar SongsMyanmar MP3 Album
မြန်မာဘလော့ဂါအသင်းနိုင်ငံတကာရုပ်မြင်(မြန်မာစာတန်းထိုး)လမင်းချစ်သူအမျိုးကောင်းသားJob အလုပ်ကိုင်ရှာဖွေရန်မြန်မာနိုင်ငံဝေဒသုတေသနအဖွဲ့(ဗေဒင်)နေခရမ်း(ထူးဆန်းထွေလာ)မြန်မာဘလော့များစုစည်းရာမြန်မာဆိုက်ကောင်းလေးများစုစည်းရာအင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့ကျင့်ရန်လိုတရအိမ်ကလေးဘ၀လက်တွဲဖော်ရှာရာသဘာဝရဲ့အင်အားမောင်လမင်းအောင်(ကဗျာ)မုန်တိုင်း(ဗဟုသုတဘဏ်)သိရသမျှ မျှဝေရာအရပ်Asian Modelsworldwidemyanmarဟင်းချက်နည်းမိသားစုအနုပညာအိမ်Myanmar DictionaryBlog ကို Face book Like လုပ်ရန်ftalkvideochatgoogle plusgtalk accounts bookဇင်မင်းထွန်း(gtalk accounts)များရယူရန်
ဥယျာဉ်လေးရဲ့ ညီအစ်ကို မောင်နှမများ
လူ့ ကျောက်ကပ်အကြောင်း သိကောင်းစရာ
သူဋ္ဌေးဖြစ်ကြောင်း နည်းလမ်းကောင်း အပိုင်း(၄)
ရေသောက်ရန် အကောင်းဆုံး အချိန်များ
မြတ်စွာဘုရားရှင် ၏ တစ်ရက်တာ ..အသုံးချသော အချိန် မျ...
Copyright © 2011 ကျွန်တော့်ဥယျာဉ်လေး | မူပိုင်ရေးသူ>> အောင်လေး(နည်းပညာ)
Design by လယ်တီမြေသား | နည်းပညာနှင့်စာပေများအား ပြန်လည်မျှဝေနေပါသည်။ - အမှတ်တရ | **ကျနော့်ဥယျာဉ်လေး**